Macallin Antonio Conte oo markale Maxkamad la koraya Kooxda Chelsea… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
Macallin Antonio Conte oo markale Maxkamad la koraya Kooxda Chelsea… (Maxay tahay sababtu?)
(London) 22 Agoosto 2019. Macallinkii hore ee Chelsea, Antonio Conte ayaa la soo warinayaa inuu markale Maxkamad la fuulayo kooxdaas, inkastoo la siiyey sagaal milyan oo magdhow ah.
Antonio Conte ayaa tallaabo kale oo dhanka sharciga ah ka qaadaya kooxda Chelsea, inkastoo sida wararku ay sheegayaan la siiyey sagaal milyan oo gini oo magdhow ah.
Jariiradda The Times ayaa warinaysa in dagaalka u dhexeeya tababaraha reer Talyaani ee Conte & Kooxda Chelsea uu weli sii socdo kaddib markii uu ka tagay naadiga 13 bilood ka hor.
Macallinka naadiga Inter Milan ee Conte ayaa la sheegayaa in qareen mayalaya oo la yiraahdo Phil Bonner uu ka qeyb galay horudhaca dhageysiga dacwada uu u gudbiyay Jimcihii la soo dhaafay Maxkamadda Shaqaalaha ee bartamaha London.
Waxaa la fahamsan yahay in dacwad ka dhan ah kooxda Chelsea uu u gudbiyey Maxkamadda, iyadoo go’aanka Madaxkamadda uu soo bixi doono sida qorshu yahay bisha soo aaddan.
Macadda illaa iyo haatan faah-faahinta dacwadaan labaad ee Conte uu ka gudbiyey Chelsea, balse waxaa la rumeysan yahay in kiisaska Maxkamaddaan loo gudbiyo ay inta badan la xiriiraan eedeymo ah in si aan cadaalad ahayn shaqada looga ceyriyey ama in takoor lagu sameeyey.
Guddi ka kooban saddex xubnood ayaa bishii April waxa ay Chelsea ku amreen inay siiyaan Conte mushahar hal sano ah oo dhan sagaal milyan oo gini, maadaama shaqada laga cayriyey oo ay ku heshiin waayeen lacagta magdhowga ah.
Maxkamadda shaqada ayaa natiijada ka soo baxda dacwada labaad u bandhigi doonta dadweynaha, waxaana ilo dhanka sharciga aad ugu xeel-dheer ay u sheegeen Jariiradda The Times in Conte oo 50-sano jir ah uu doonayo inuu ceebeeyo Chelsea carro uu u qabo darteed maadaama si aan wanaagsanayn ay shaqada kaga cayrisay ama inuu doonayo lacag fiican oo magadhow ah.
Waxaana sharci yaqaankaan uu sidoo kale sheegay in kiiskaan labaad ee la xiriira in si aan cadaalad ahayn shaqada looga ceyriyay ay keeni karto ugu badnaan in kooxda Chelsea lagu xukumo inay bixiso lacag dhan 60 kun oo gini.